July 2013 | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ R.t Hon John Bercow ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 31, 2013/
Jul 30, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ အမျိုးသမီးစီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရှင်များ အသင်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
Jul 26, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 25, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 24, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးရာဌာန အကြီးအကဲ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်မြင့် အား UNAIDS မှ လာရောက် တွေ့ဆုံ
Jul 12, 2013/
Jul 11, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Hon. Mr. Bob Carr ဦးဆောင် သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလွန်းသီ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ First Asia Pacifice ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ Executive President, Mr. Stanley Yang ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
Jul 10, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း US-ASEAN Business Council အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် ဖင်လန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ကင်မိုကေးဂျူနန် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ၊ ပစိဖိတ်နှင့် ဓနသဟာယရေးရာဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Seyed Abbas Aragchi ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 05, 2013/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသည့် ဦးလှမြင့်ဦးနှင့် ဦးညွှန့်တင် တို့သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vasily B. POSPELOV ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Murray McCully အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြို့ရေးအစီအစဉ် (UNDP)မှ အစီအစဉ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး Mr.Edin Elgsaether နှင့် ပါလီမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Mr.Gopalan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 04, 2013/